သစ်သားနဲ့ ဆောက်ထားတဲ့အိမ်တွေမှာ ညည တောက်ခေါက်သံတွေ ထွက်နေတယ်ဆိုရင်…! – Myanmar Magazine
သစ်သားနဲ့ ဆောက်ထားတဲ့အိမ်တွေမှာ ညည တောက်ခေါက်သံတွေ ထွက်နေတယ်ဆိုရင်…!
March 24, 2019 myanmarmagazine	ပြည်တွင်သတင်း
သစ်‌မင်း ပုံပါ ။ သစ်‌ဆိုး ၀ါးဆိုး‌တွေကို နိုင်‌နင်းတယ်‌လို့ ဆိုပါတယ်‌ ။ အိမ်‌‌တွေမှာ သစ်‌ဆိုတာ မပါ မဖြစ်‌ပါ ။ သစ်‌၀ါး‌တွေ ဆိုတာကလည်း ‌တောမှာ‌ ပေါက်‌ကြတယ်‌ ။
အချို့သစ်‌၀ါး‌တွေက အန္တရာယ်‌ ဖြစ်‌‌စေတတ်‌တဲ့ ကမ္မစိဒ္ဓိရှင်‌‌တွေရဲ့ အရိပ်‌အ‌ငွေ့‌တွေ ပါလာတတ်‌ကြပါတယ်‌ ။ အဲလို သစ်‌၀ါးမျိုးနဲ့ ‌ဆောက်‌မိရင်‌ အဲဒီအိမ်‌မှာ‌ နေကြသူများအတွက်‌ မ‌ကောင်း‌တော့ပါဘူး ။ ပြဿနာဖြစ်‌တာ များလာပါတယ်‌ ။ သတိပြုမိရင်‌ ညည‌ တောက်‌‌ခေါက်‌သံလိုမျိုး ကြာရတတ်‌ပါတယ်‌ ။ ဒါကတကယ်‌ပါ လက်‌သမား‌တွေ သိကြပါတယ်‌ ။
ကဲ ဒီအခါ ဘယ်‌သစ်‌၀ါးက မ‌ကောင်းဆိုးဝါးသ‌ဘော ပါ‌နေတာလဲ ။ ဘယ်‌လို သိမလဲ ။ သစ်‌‌ခြောက်‌လို့လည်း‌ ခေါ်တယ်‌‌ အဲလို‌ တောက်‌‌ခေါက်‌တဲ့ သစ်‌၀ါးဆိုရင်‌‌လေ ။ ဘယ်‌‌နေရာမှာ သုံးမိမှန်း မသိ‌တော့ ဘယ်‌လိုဖယ်‌မလဲ ။ ‌နေရာသိရင်‌‌တောင်‌ ပရိ‌ဘောဂကို ဖျက်‌ဆီးပြီးအသစ်‌ လုပ်‌ရမှာ‌နော်‌ ။ အဲလိုဆို ကုန်‌ကျစားရိတ်‌‌တွေ များ‌တော့မယ်‌ ။ အသစ်‌လုပ်‌ရင်‌‌တောင်‌ သစ်‌၀ါးအပိုင်းတင်‌ မပြီးဘူး ။ တိုက်‌‌တွေဆိုရင်‌ ပန်းရံ ကိစ္စ‌တွေ ဒက်‌ခ‌ရေးရှင်း အပိုင်း‌တွေထိ ပြန်‌ကုန်‌ရ‌တော့မယ်‌ ။
သစ်‌‌ခြောက်‌ကိုနိုင်‌တာ အခုပုံပါ သစ်‌မင်းပါပဲ ။ ‌တောက်‌‌ခေါက်‌သံ ကြားရတဲ့‌ နေရာမှာ သစ်‌မင်းကို သပ်‌သ‌ဘောမျိုး ရိုက်‌လိုက်‌ရင်‌ ပြီးပါတယ်‌ ။ အကယ်‌လို့ ‌သေချာချင်‌ရင်‌ ‌တောက်‌‌ခေါက်‌သံ ကြားကြား မကြားကြား အိမ်‌ရဲ့ ‌လေးဖက်‌‌လေးတန်‌မှာ သစ်‌မင်းအသားစ‌လေး‌တွေကို သပ်‌ရိုက်‌ခဲ့ရင်‌ ရပါတယ်‌ ။ ‌တောက်‌‌ခေါက်‌သံဆိုလို့ လူ‌တောက်‌‌ခေါက်‌သလိုမျိုးမဟုတ်‌ဘူး‌နော်‌ ။ အိမ်‌‌မြောင်‌ စုတ်‌ထိုးသလိုမျိုး သ‌ဘောဆင်‌ပါတယ်‌ ။
သစ်‌မင်းက အ‌ခေါက်‌ပိုင်းမှာ ပုံပါအတိုင်း ကွင်း‌ချိတ်‌က‌လေး‌တွေ ဆက်‌‌နေပါတယ်‌ ။ ဒါ‌တွေက ဘုရား‌ဟော မဟုတ်‌ပါဘူး ။ ဘုရား‌ဟော မဟုတ်‌လို့ ငါတို့‌တော့ ပယ်‌မယ်‌ဆိုသူ‌တွေ အတွက်‌က‌တော့ ရှင်းပြဖို့ မရှိပါဘူး ။ သို့‌သော်‌ ဘုရား‌ဟောမဟုတ်‌လို့ ပယ်‌ပြီး‌တော့ ‌လောကီနယ်‌အတွင်းမှာ‌ နေကြသူ‌တွေအဖို့ရာ အလွန်‌တရာမှ အန္တရာယ် များလှပါတယ်‌ ။ ဘာဖြစ်‌လို့လဲဆို‌တော့ သစ်‌‌ခြောက်‌မှာ အစွဲရှိ‌နေတဲ့ ကမ္မစိဒ္ဓိရှင်‌က မ‌ကောင်းရာ မ‌ကောင်း‌ကြောင်းလုပ်‌ဖို့ အိမ်‌ရှင်‌‌နေရာကို တကယ့်‌အိမ်‌ရှင်‌ မ‌နေ‌သေးခင်‌ကတည်းက ဦးသွားလို့ပါပဲ ။
တစ်‌ခု‌တော့ရှိတာ‌ပေါ့ အခြားသမာဓိအား‌ကောင်းသူ သမထသမားဖြစ်‌‌စေ ၊ သမထမလုပ်‌‌သော်‌လည်း ၀ိပဿနာ သ‌ဘောအသိ အား‌ကောင်းသူ တရားရှင်‌ ဖြစ်‌‌စေ‌ပေါ့ ထိုသူတစ်‌ဦးတစ်‌‌ယောက်‌ရဲ့ အရှိန်‌အ၀ါ‌ကြောင့်‌လည်း သစ်‌‌ခြောက်‌မှာစွဲ‌နေတဲ့ ကမ္မစိဒ္ဓိသ‌ဘောကို ဖျက်‌စီးနိုင်‌ပါတယ်‌ ။ ဒါမျိုးကလည်း ကြုံဦးမှ‌လေ ။ ‌သေချာတာက‌တော့ ‌တောက်‌‌ခေါက်‌သံကြားကြား မကြားကြား သစ်‌မင်းကို အိမ်‌သစ်‌ အိမ်‌‌ဟောင်းမ‌ရွေး ညှပ်‌ထည့်‌‌ပေးလိုက်‌ရင်‌ ရပါပြီ။
ဒါ့အပြင် သစ်‌မင်းဟာ ပ‌ယောဂ ဖြစ်‌သူကို ဖြစ်‌တဲ့‌နေရာမှာ ထိ‌တွေ့ထားရင်‌ ကာယကံရှင်‌ဟာ သိတတ်‌သူဆိုရင်‌ ခန္ဓာကိုယ်‌က‌နေ စူးကနဲ စူးကနဲနဲ့ ကမ္မစိဒ္ဓိစက်‌‌တွေ အ‌နှေးနဲ့အမြန်‌ ထွက်‌တာကို သိပါလိမ့်‌မယ်‌ ။ ဒါက‌တော့ ကျွန်‌‌တော်‌ စမ်းကြည့်‌ဖူးတာကို‌ ပြောပြတာပါ ။ ဖြစ်‌တဲ့‌နေရာ မသိရင်‌ ဦး‌ခေါင်းနဲ့ ၀မ်းဗိုက်‌‌ပေါ် တင်‌ပါတယ်‌ ။
← အတွင်းခံဘောင်းဘီ မပါသူအား ချုံပုတ်သို့ အတင်းဆွဲခေါ်ပြီး သားမယားပြုကျင့်မှု
ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် ကာမစိတ်ကြွဆေးများလိုက်လံရောင်းချနေသူတစ်ဦးအားတွေ့ရှိ၍ ဖမ်းဆီးအရေးယူထား →
မိဘဖြစ်သူ ရက်လည်အတွက် ညီမဖြစ်သူကို ကြိုပြီးပြန်အလာမှာ ဆိုင်ကယ်ကို ဆီဘောက်ဆာကားက ၀င်တိုက်ပြီး နှစ်ဦးစလုံးသေဆုံး
March 21, 2019 myanmarmagazine Comments Off on မိဘဖြစ်သူ ရက်လည်အတွက် ညီမဖြစ်သူကို ကြိုပြီးပြန်အလာမှာ ဆိုင်ကယ်ကို ဆီဘောက်ဆာကားက ၀င်တိုက်ပြီး နှစ်ဦးစလုံးသေဆုံး
ရခိုင်မြောက်ပိုင်း တိုက်ပွဲများ ဆက်ဖြစ်ပွားနေ
January 10, 2019 myanmarmagazine Comments Off on ရခိုင်မြောက်ပိုင်း တိုက်ပွဲများ ဆက်ဖြစ်ပွားနေ
အလှူခံသူတစ်ဦးအား ဓါးဖြင့် ထိုးသတ်မှု ကျောက်ဖြူမြို့၌ ဖြစ်ပွား
September 15, 2018 myanmarmagazine Comments Off on အလှူခံသူတစ်ဦးအား ဓါးဖြင့် ထိုးသတ်မှု ကျောက်ဖြူမြို့၌ ဖြစ်ပွား